Uhlolo lweS Salem Uvavanyo oluPhezulu
I-Salem Village yayiyimimandla yokulima eyayisemamitha angamahlanu ukuya kwii-7 ukuya ngasentla kweSalem Idolophu eMassachusetts Bay Colony. Kwiminyaka ye-1670, i-Salem Village yacela imvume yokwenza icawa yakhe ngenxa yemida yecawa yaseKapa. Emva kwexesha elithile, i-Salem Idolophu idlwengula ngesicelo seSalma saseSalema sonto.
NgoNovemba 1689, iSalma Village yaqesha umphathiswa wayo wokuqala owamiselwayo - uMfundisi uSamuel Parris - kwaye ekugqibeleni iSalm Village yayinebandla.
Ukuba le cawa yabanika inqanaba lokuzimela ngaphandle kwidolophu yase Salem, eyayidala inzondo.
Nangona uMfundisi uParris waqale wamkelwa ngeengalo ezivulekileyo ngabahlali baseMzaneni, indlela yakhe yokufundisa kunye nenkokeli yahlula amalungu eSonto. Ububudlelwane baba bunzima kangangokuba ngokuwa kwe-1691, kwakukho ukuthetha phakathi kwamalungu athile ecawa yokuyeka umvuzo kaReverend Parris okanye ukubonelela yena kunye nentsapho yakhe ngamatye ngexesha leenyanga ezizayo zasebusika.
NgoJanuwari 1692, intombi kaReverend Parris, u-Elizabeth oneminyaka-9 ubudala, no- Abigail Williams , oneminyaka eyi-11 ubudala, wagula kakhulu. Xa iimeko zezingane zibuhlungu, zabonwa ngugqirha ogama linguWilliam Griggs, owafumanisa ukuba bobabini ngesithwathwa. Emva koko amanye amantombazana amantombazana aseSalem Village abonisa iimpawu ezifanayo, kuquka uAnner Putnam Jr., uMercy Lewis, u-Elizabeth Hubbard, uMary Walcott noMary Warren.
La mabhinqa amancinci ayabonwa ngokufanelekileyo, aquka ukujikijela emhlabathini, ukukhwabanisa nogonyamelo olungalawulekiyo lokumemeza kunye / okanye ukukhala ngokungathi bangenayo iidemon ngaphakathi.
Ngasekupheleni kukaFebruwari 1692, amagunya asekuhlaleni ayekhuphe umyalelo wokubanjwa komkhonzi weRevernd Parris, uTituba .
Amagunya angaphezulu anikezelwa ngamanye amabhinqa amabini amantombazana amgulayo atyholwa ngokuwabetha, uSara Good , owayengenamakhaya, noSara Osborn, owayesekhulile.
Aba bathathu abatyholwa abathakathi babanjwa baza baziswa phambi kooMantyi uJohn Hathorne noJonathan Corwin ukuba babuze imibuzo malunga nokugwetywa kobugqirha. Abamangaleli babonisa ukufaneleka kwabo enkundleni evulekile, bobabini abalungileyo kunye no-Osborn bahlala bephika nayiphi na ityala. Nangona kunjalo, uTituba wavuma. Wayebiza ukuba uncedwa ngabanye abathakathi abaye bakhonza uSathana ngokukhupha amaPuritan.
Ukuvuma kukaTibuta kuye kwazisa ukuxhatshazwa kweengxaki kungekhona kwiS Salem kuphela kodwa kuyo yonke iMassachusetts. Ngethuba elifutshane, abanye babetyholwa, kubandakanywa namalungu amabandla aphakamileyo kaMarta Corey noRebecca Umhlengikazi, kunye nentombi eneminyaka emine ubudala kaSara Good.
Inani labanye abatyhulwa abatywala balandela uTibuta ekuvumeni kwaye nabo bathiwa ngabanye. Njengempembelelo ye-domino, izilingo zamatye zaqala ukuthatha inkundla zendawo. Ngomhla ka-Meyi 1692, kuye kwasungulwa inkundla ezimbini ezinkundleni zokuncedisa ukunciphisa intshintsho kwinkqubo yenkundla: iNkundla ye-Oyer, oku kuthetha ukuva; kunye neNkundla yeComphela, oku kuthetha ukuthatha isigqibo.
Ezi nkundla zinegunya phezu kwazo zonke iziganeko zobuthakathi kwi-Essex, Middlesex, nase-Suffolk.
NgoJuni 2, 1962, iBhishop Bhabhri waba ngumlumbi wokuqala wokugwetywa, kwaye wafa emva kweentsuku ezisibhozo emva kokuxhoma. Ukulenga kwenzeka eTownm Town kwizinto eza kuthiwa yiGallows Hill. Kwiinyanga ezintathu ezizayo, abalishumi elinesibhozo ngaphezulu baya kuxhonywa. Ngaphezu koko, abaninzi abantu baya kufakwa ejele ngelixa belindele ukuvalelwa.
Ngo-Oktobha 1692, iRhuluneli yaseMassachusetts yavala iiNkundla ze-Oyer kunye neCompiner ngenxa yeembuzo ezavela malunga nokufaneleka kwezilingo kunye nokunciphisa inzala yoluntu. Ingxaki enkulu kule ntshutshiso yayikukuba ubungqina obuninzi 'bugqwirha' bububungqina obucacileyo - okokuba umoya womsolwa wayefikele ubungqina kumbono okanye kwiphupha.
Ngomhla ka-Meyi 1693, urhuluneli waxolela bonke abagqwirha waza wachaza ukukhululwa kwabo entolongweni.
Ukususela ngoFebruwari 1692 no-Meyi 1693 xa le nto yahlaselwa, abantu abangaphezu kwamakhulu amabini babetyholwa ngobuqhetseba kwaye malunga nama-20 abulawa.
Indlela yokucoca iiGrips kwiGlabhu yakho